Istuudiyaha CRM Weli Wuxuu Ku Socdaa Xoog Wanaagsan Ee Kulliyow | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Istaadiyeyaasha CRM Weli Waxay Ku Sii Wanaagsan Yihiin Facilis
Istaadiyeyaasha CRM Weli Waxay Ku Sii Wanaagsan Yihiin Facilis
HUDSON, MA (Nofeembar 25th, 2019) - Facilis, shirkad caalami ah oo hormuud u ah qarashka wax ku oolka ah, xalka kaydinta kaydinta wadaagga sare leh ee shabakadaha wax soo saarka warbaahinta, ayaa maanta ku dhawaaqay in fadhigiisu yahay Texas CRM Studios dhawaan ku daray cusub Facilis Nidaamka kaydinta wadaagga ah ee lagu taageerayo kororkiisa sii socda. Waxaa la aasaasay 1994, CRM wuxuu ku bilaabay sidii Circle R Media, waaxda wax soo saarka ee Circle R Group, wakaaladda xayeysiinta ee guryaha ee RadioShack Corporation. 2003, Circle R Media wuxuu ka leexiyay RadioShack wuxuuna noqday shirkad madaxbanaan, isagoo qaatay magaca cusub, CRM Studios. 2008, CRM Studios wuxuu ka soo dhaqaaqay meeshii ay ku yaaliin Fort Worth, TX kuna wareejisay tas-hiilaadyadii ay hadda ku sugnaayeen ee Studio-yadii taariikhiga ahaa ee Las Colinas ee Irving, TX. Dhismaha weyn ee weyn wuxuu hoy u ahaa qaar ka mid ah filimada caanka ah iyo bandhigyada TV-ga oo ay ku jiraan Silkwood, JFK, Robocop, Break Xabsiga, Iyo Walker Texas Ranger. Dhismaha mid ka mid ah ayaa beddelay magacyo 2013 markii laga iibiyey Mercury Radio Arts, shirkadda waalidka ee TheBlaze, faallo telefishanka muxaafidka ah ee Glenn Beck's news, ra'yi, iyo shabakadda madadaalada.
Michael Murray wuxuu la joogay CRM ilaa 2002 wuxuuna xirnaa koofiyado badan. Maanta isagu waa CRM's, Director of IT and Broadcast Engineering. “Maalmihii hore, CRM waxay qandaraas la gashay RadioShack si ay u sameeyaan qiyaastii 20 saacadood ee satellite Waxaan sii daayay bil, intaas waxaa dheer, waxaan sameyneynay dhamaan waxyaabaha ay ku ciyaaraan alaabada ay ku ciyaaraan iyo xayeysiisyada taleefanka gacanta qaarkood, "ayuu yiri Murray.
“2005, CRM gabi ahaanba waa ahaa AVID-batay. Waan haysannay AVID Midnimada kaydinta tifaftirkayaga asal ahaan. Waxaan ku duubnay cajalad, waxaan ku duubnay Midnimada, ka dibna dib ugu tuurney cajalad. Taasi waxay ahayd qulqulkayagii hore ee SD. Mar ayaan u weecinay HD, AVID Kaydinta la wadaago ayaa noqotay meel ka baxday kala duwanaashaheena, sidaa darteed waxaan raadinay waxyaabo kale. Baaritaan dheer kadib, waxaan ugu dambeyntii ku degnay Facilis. "
CRM waxay iibsatay wixii ugu horreeyay Facilis nidaam, 24TB 24D, oo ku yaal 2006. Waxay ahayd mid ka mid ah nidaamyadii hore oo leh tiro hoose oo tiro yar sida uu sheegay Murray. "Sababta Facilis waxaa laga soo xushay kuwa kale waxay ahayd maxaa yeelay waxay ahayd mid dhakhso badan oo kufilan baahideena wax qabad, waxay leedahay awood ku filan, oo si fudud ayaa loo fidi karaa hadii loo baahdo iyadoo lagu dari karo server ama ka badan.
Horumar degdeg ah sannadihii, iyo CRM ayaa beddelay oo kor u qaadday Facilis nidaamyada kaydinta la wadaago dhawr jeer. Waxaan ku jirnaa 4th iyo 5th Facilis hadda server. Facilis Had iyo jeer way fiicnaayeen marka la samaynayo ganacsi haddii aan u baahan nahay awood dheeri ah, ”ayuu yidhi Murray.
Fursad ayaa dhacday markii Glenn Beck uu u baahday guri cusub oo uu ku soo bandhigo. “Waxaan u dhaqaaqay Glenn Beck istuudiyaha Las Colinas oo laga keenay New York, anigoo dhisaya xaruntiisa warbaahineed oo ay kujirto 15000sq ft Stage A, 3200sq ft Stage C iyo Koontaroolka Qolalka. CRM markaa waxay qandaraas la gashay Glenn si uu u qabto shaqadiisa wax soosaarka oo dhan laga bilaabo 2012. ”Dhismaha istuudiyaha Las Colinas wuxuu ka kooban yahay 9.89 Acres. Dhismaha Koowaad, Marxaladda Glenn ee A, waa mid weyn oo ku filan in lagu qabto 5 noocyo kala duwan. CRM hadda waxay haysataa marxaladda dhexe, oo qiyaastii ah 4500 sq. Ft, iyo mid ka mid ah qolalka kantaroolka. Markii Glenn uu bilaabay inuu wax soo saar ka sameeyo istuudiyaha, waxay noqotay istuudiyaha ugu weyn ee TV-ga Mareykanka ee ka baxa war baahinta maalinlaha ah. Glenn wuxuu iibsaday oo dib ugu beddelay Studiosios-ka Las Colinas ee loo yaqaan "Mercury Studios Studios" ee 2013. CRM waxay wax soo saar u sameysay Beck iyo shirkadiisa Blaze Media muddo 4.5 sano ah ilaa Glenn uu go'aansaday inuu wax soo saar ka sameeyo oo uu guriga ku dhajiyo. Laga soo bilaabo 2017, CRM Studios hadda waa kireyste Mercury Studios oo qabanaya shaqo badan oo kala duwan oo loogu talagalay liiska macaamiisha badan.
Kordhinta Kaydinta iyo Raadinta Raadinta
Sannadkii hore, CRM wuxuu ku daray 128TB cusub Kaydinta Wadaagga ee Facilis nidaam. Had iyo jeer waxay lahaan jireen Fibre Channel inta udhaxeysa keydkooda iyo nidaamyada tafatirka bilowgiiba. Waxaan marwalba marin kuheleynay Ethernet, laakiin waxay ahaan jirtay 1Gig oo aan ugu filneyn tafatirayaasha. Waxaan inta badan nahay Dukaan Fiber Channel ah, laakiin markii ay adeegayaashu qaban karaan 10GigE, waxay ahayd maskax-daro in la isku xiro qaar ka mid ah macaamiisha 10GigE. Waa awood gaar ah oo ah Facilis yeelashada Fiber Channel iyo Ethernet isku si isku mid ah. Waxaan u maamuli karnaa si habsami leh kaydinta labada dhan Ethernet iyo Fiber Channel, ayuu yidhi Murray. CRM inta badan waa “Mac House” oo maamula Adobe Premiere Pro iyo barnaamijyadooda kale ee Cloud Cloud; si kastaba ha noqotee, way wadi karaan oo weli wey socon karaan AVID nidaamyada markii loo baahdo.
Murray ayaa yidhi, "Maalinba maalinta ka dambaysa, waxaan socodsiinnaa illaa afar macmiil Fiber Channel ah, shan ama lix macaamiil 10GigE ah, iyo shan kale ama lix macaamiil 1GigE ah," ayuu yidhi Murray. "Inta badan Fiber Channel wuxuu ku xiran yahay goobta shaqada ee lagu socodsiinayo Premiere ama alaabada kale ee Adobe, halka ProTools, StorageDNA, iyo shaqooyinka tamarta badan ay ku jiraan 10GigE."
Dhawaan, CRM wuxuu bilaabay isticmaalka Facilis FastTracker taas oo u siisay dhammaan tifaftirayaasha inay u fududaato helitaanka baaxad weyn oo hantiyeed oo u aragta adeegsiga soo noqnoqda. Mid ka mid ah macaamiisheena waa weyn GameStop. Waxaan sameyneynaa dhammaan waxyaabaha ay ku keydsan yihiin telefishanka, ayay tiri Murray. Waxaan ka helnaa warbaahin fara badan oo aan ka helno ilo dibadeed - soo saareyaasha ciyaarta, astaamaha, qiimeynta ESRB, waxaanan bil walba ka qabannaa istuudiyaha toos u nool. Dhammaan hantidaas, waxaan u baahan nahay helitaan deg deg ah, sidaa darteed FastTracker wuxuu noo ahaa mid aad muhiim noogu ah. Kaliya waa xaddiga saxda ah ee maareynta warbaahinta annaga, iyo dhexgalka aan la leenahay Adobe Premiere Pro ayaa ka dhigeysa kordhinta dabiiciga ah tifaftirayaasha. ”
Xallinta iyo Waxqabadka
CRM sida caadiga ah waxay ku qabataa 1080p ama 720P ProRes iyadoo la adeegsanayo aaladda AJA oo ay ku jiraan waxyaabaha gudaha ah ee laga soo saaray qolka kontaroolada. Duurka dhexdiisa, way adeegsadaan Sony FS7s iyo Kaamerooyinka RED, iyagoo qabanaya waxkasta 720P ilaa 4K dhanka Sonys iyo ilaa 6K dhanka REDs. Murray wuxuu ku dhacaa toogashada naftiisa ilaa 5K oo leh qeybta ugu weyn. Mararka qaarkood waxay helayaan qulqulka naqshadaha garaafyada ee sidoo kale adeegsada faylasha DPX sidoo kale.
“Xitaa marka aan tooganeynno 4K +, badiyaa waxaan keennaa gudaha HD macaamiisha badankood. 4K iyo xallinta sare sida samatabbixin ayaa dhacda, laakiin runtii waxay kuxiran tahay halka ay ku socoto. Tusaale ahaan, waxaan dhowaan ku sameynay gabal madxaf oo ku yaal 8K, ”ayuu yidhi Murray. "Intooda badan inkasta oo 1080p ama ka hooseeya loo gudbiyay sida faylalka ProRes."
Ma lihin wax waxqabad ah oo la xiriira wax kasta oo aan dib u habayn ku sameynay Facilis. Waxaan ku dhex daraynaa xalka jadwalka laga bilaabo 720p ilaa 4K laga bilaabo Sony Kaamirooyinka ilaa lakabyada '10' oo wax laga beddelay waligoodna dhib ma aysan aheyn, ”ayuu yiri Murray. “Macaamiisha Fiber Channel waxay hadda ku sugan yihiin 8Gig. Adeegyadeena ayaa horeyba diyaar ugu ahaa 16 ama 32Gig, marka waa wax aan raaxo laheyn anigoo ogaanaya hadii aan ubaahanahay wax soo saar dheeri ah, kaliya waxaan ubaahanahay inaan casriyeeyo kaararka Fiber ee macaamiisha. Xitaa iyada oo la adeegsanayo sheyga 'RED' ee aan sameyno, kaas oo ah 4,5, ama 6K, waxqabadka ayaa fiicnaa. "
Sidaa darteed nidaamyo badan oo kaydinta ayaa u baahan shahaadada IT-ga si loo maareeyo loona maareeyo. CRM, markasta way fududahay in la maamulo Facilis nidaamka laftooda. "Tan iyo markii la orday v7 ee Facilis barnaamijyada kombiyuutarka, waxaan hadda isticmaaleynaa macmiilka shabakadda ee maamulka. Waxay ahayd wax la yaab leh oo si fudud loo isticmaali karo. Anigu wali waan ku hanan karaa server-ka meel fog iyada oo loo marayo macmiilka desktop fog, laakiin adeegsiga maalinba maalinta ka dambeysa, dhammaan tifatirayaasha, kooxda maqalka, iyo aniga, kaliya waxaan u adeegsadaa Websaydhka Webka Fudud hadda. Ma jiro maamul badan oo ay tahay inaan sameeyo, ”ayuu yidhi Murray. Maalintii, waxaan adeegsaneynay hal hal macmiil midkiiba kadibna waxaan sii balaarin karnaa cabirradaas hadba sida loogu baahdo. Imika oo mugdigu aad u balaadhan yahay, way ka sahlan tahay had iyo jeer maaraynta meelaha bannaan iyo rukhsadaha.
Caawinta ma ahan wax inta badan macaamiisha ay ka hadlaan, laakiin CRM, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka dhigaya inay ku soo noqdaan Facilis. “Taageerada ayaa la yaab leh. Muddo sannado ah ayaa la soo saaray macmiil aan caadi ahayn ama server ka shaqeeya oo si dhakhso leh ayay dhakhso ugu jawaabaan, ayay tidhi Murray. “Ama taleefanka iga gala ama i caawinaya. The Facilis kooxda marwalba waxay ka gudubtaa ama ka gudubtaa si ay u hubiso ma aha oo kaliya inay wax hagaajiso, laakiin inay na wargeliso oo aan wax barano si aan sifiican u caawinno nafteena. Taasi waxay ku kacday lacagtii halkaas. Tan iyo markii aan u gudubnay 'v7', taageerada ayaa xitaa ka yaraatay baahi kasta. Waxay noqotey "iska dhig oo iska ilow" qaabeynta taas oo ah waxa aad ka rabto kaydintaada la wadaago. "
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie AVID Broadcast Engineer Broadcast Engineering Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Broadcast-SocialMeida tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor dhexgalka SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago TV Technology TVU Networks Ultra HD Forum Video Engineer	2019-11-25
Previous: Isbarasho: Red Giant oo dhameystiran shaqsiyaadka, ardayda iyo macallimiinta, Diiwaan Gelinta Sannadlaha ee Dhammaan ee Tafatirka, Qalabka Motion iyo aaladda VFX
Next: Telefishanka Saint-Petersburg wuxuu Doortay Medialooks VT Server si uu U Siiyo Quudinta Master-ka Goobaha Fog